थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पु्ष्टि, कहाँबाट आएका थिए उनिहरु ? — Sanchar Kendra
थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पु्ष्टि, कहाँबाट आएका थिए उनिहरु ?
बागलुङ । नेपालमा थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । बागलुङका ६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको। गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । संक्रमित ६ जना नै भारतबाट आएको खुलेको छ ।
तमानखोला गाउँपालिकाको अर्को विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका ४ जना र बडीगाड गाउँपालिकाको एक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका २ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । संक्रमितलाई धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बागलुङमा करीब ४ सयजना भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेको बताइएको छ ।